देउवा निवासमा ‘सेलेक्टेड नेताको’ गोप्य भेला- खोजियो शशांकको साथ – Nepal Press
देउवा निवासमा ‘सेलेक्टेड नेताको’ गोप्य भेला- खोजियो शशांकको साथ
‘सोमवारको प्रदर्शन संयमित बनाउँ, अदालतको फैसला पर्खौं’
२०७७ पुष १२ गते २०:२३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा आफूलाई साथ दिन महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँग आग्रह गरेका छन् ।
संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खेमाबाट तीव्र आलोचना खेपिरहेका बेला देउवाले कोइरालाको साथ खोजेका हुन् ।
सभापति देउवा आफैंले फोन गरेर आइतबार बिहानै महामन्त्री कोइरालालाई आफ्नो निवासमा आउन आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस वृत्तमा गोप्य राख्न भनिएको भेटमा सभापति देउवा, महामन्त्री कोइराला, अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यहरु डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक उपस्थित थिए ।
देउवाले बोलाएपछि बिहान ११ नबज्दै खाना खाएर कोइराला बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । नेताहरुबीच करीब दुई घण्टा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा सभापति देउवाले आफ्ना बाध्यताहरु सुनाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा संवैधानिक परिषदमा आफ्नो भूमिका स्वाभाविक भए पनि नेकपा विवादका कारण त्यसलाई अतिरञ्जित गरिएको देउवाको गुनासो थियो ।
‘संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा धेरै पहिला कुरा भइसकेको हो । सबैथोक बिग्रेपछि निर्णय भएकोले अप्ठ्यारो पर्यो’, देउवालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । सभापति देउवाले सोमबारको प्रदर्शन, त्यसपछि पार्टीले लिनुपर्ने नीति र महाधिवेशन समेतका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
नेकपाभित्र विवाद बढेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भंग गर्लान् भन्ने आफूले नठानेको देउवाले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्यो भनेर आफूलाई लगाइएको आरोपको पनि देउवाले खण्डन गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले भेटौं भनेपछि भेट्नै पर्यो । भेट्ने वित्तिकै मिल्यो भन्दिने ?’ देउवाको प्रश्न थियो ।
विगतमा भन्दा खुलेर प्रस्तुत भएका देउवाले पार्टीभित्र अनावश्यक विषयमा आफूलाई दुःख दिने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । ‘संसद विघटनको विरोध गरेकै छु । आन्दोलन घोषणा भएकै छ तर अदालत पनि त छ’, देउवाको भनाइ थियो ।
उनले सोमबारको प्रदर्शनलाई सफल र संयमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘सडकबाट संसद पुनःस्थापना गर्नुभन्दा अदालतको निर्णय हेरेर चुनावमा जानु कांग्रेसको हितमा हुन्छ । कार्यकर्ताको मूड पनि बुझ्नुपर्यो नि’, देउवाको भनाइ थियो ।
सभापति देउवाले महामन्त्री कोइरालातर्फ इंगित गर्दै ‘मलाई सघाउनुपर्यो’ भनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार महामन्त्री कोइरालाले केन्द्रीय समिति बैठकमा सबैको कुरा सुन्न र आलोचना सहन देउवालाई सुझाएका थिए ।
‘सबैको कुरा सुनौं । राजनीतिक निर्णय विस्तारै लिनुपर्छ । रिसाउन हुँदैन’, कोइरालाको भनाइ थियो । महामन्त्री कोइरालाले संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने आफ्नो पनि धारणा रहेको बताएका थिए । यद्यपि विवाद बढ्न नदिन सबैसँग संवादको पहल गर्न आफू तयार रहेको कोइरालाको भनाइ थियो ।
बैठकमा सहभागी देउवा पक्षका नेताहरुले पार्टीको आन्तरिक र राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सभापति र महामन्त्रीको धारणा एउटै बनाएर जाँदा सबैलाई फाइदा हुने बताएका थिए । छलफलमा महाधिवेशन टार्ने आफ्नो योजना नरहेको देउवाले सुनाएका थिए । महामन्त्री कोइरालाले आन्दोलन, महाधिवेशन र निर्वाचनबारे पार्टीभित्र समझदारी बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
दुई घण्टा निरन्तर छलफल गरेका नेताहरु पौने दुई बजेतिर बूढानीलकण्ठबाट बाहिरिएका थिए । कांग्रेसवृत्तमा यो छलफललाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । जहाँ वरिष्ठ नेता पौडेल मात्रै होइन, उपसभापति विमलेन्द्र निधिसमेत बोलाइएका थिएनन् ।
प्रकाशित: २०७७ पुष १२ गते २०:२३